Ijaarka Forex | Waa maxay Margin iyo Leverage ee Forex, Wax ka baro FXCC
Lacagta Lacagta & Marginka
Fikradda Leverage sharaxay
Waxaa muhiim u ah ganacsatada aan ganacsiga lahayn iyo kuwa macaamiisha ah ee cusub inay iibsadaan forex, ama xaqiiqo cusub si ay u ganacsadaan suuq maaliyadeed, si buuxda u fahmaan fikradaha leverage iyo margin. Ganacsatada cusub badankood waa kuwo aan caqli gal ahayn inay bilaabaan ganacsiga oo ay ku guuldareystaan ​​in ay fahmaan muhiimada iyo saameynta labadaan arrimood oo muhiim u ah guulaha ay gaari karaan.
Leverage, sida ereyga la soo jeediyay, waxay bixisaa fursada ganacsatada si ay u isticmaalaan lacagta dhabta ah ee ay ku leeyihiin koontooyinkooda oo ay halis ugu jiraan suuqa, si ay u suura galiyaan in ay faa'iido faa'iido kasta. Ereyada fudud; haddii ganacsade uu isticmaalo xajmiga 1: 100 ka dibna dollar kasta waxay dhab ahaantii sameeyaan inay halis ugu jiraan in ay xakameyaan dollarka 100 ee suuqa. Maalgashadayaasha iyo ganacsatada waxay sidaas u isticmaalaan fikradda nuqulka si ay u kordhiyaan faa'iidadooda ganacsi gaar ah, ama maalgashi.
In ganacsiga forex, leverage on offer waa guud ahaan ugu sareeya ee suuqyada maaliyadeed. Heerarka sare ayaa lagu dejiyaa qosolka xajmiga waxayna kala duwanaan kartaa, laga bilaabo: 1: 1, 1: 50, 1: 100, ama xitaa ka sareeya. Kalluumeysatadu waxay u oggolaanayaan ganacsatada inay hagaajiyaan nuqulka sare ama hoos, laakiin waxay xadayn doonaan xadka. Tusaale ahaan, FXCC noociisa ugu sarreeya (xisaabta CPN) waa 1: 300, laakiin macaamiishu waa bilaash inay doortaan heerka hooseeya.
Iyadoo 1: 1 waxay ku furtaa dollar kasta oo kuugu jirta koontooyinkaaga marinka 1 ee ganacsiga
Iyadoo 1: 50 waxay ku furtaa dollar kasta oo kuugu jirta koontooyinkaaga marinka 50 ee ganacsiga
Iyadoo 1: 100 waxay ku furtaa dollar kasta oo kuugu jirta koontooyinkaaga marinka 100 ee ganacsiga
Maxay yihiin Margin?
Margin waxaa si fiican loo fahamsan yahay lacag dammaanad ah oo ku salaysan ganacsade, ganacsade wuxuu damiyaa dammaanadda marka loo eego deymanka xisaabteeda, si uu u furo boos (ama jagooyin) suuqa, tani waa shuruud sababta oo ah inta badan Dareewaladu ma bixiyaan deyn bixin.
Marka ganacsiga la mariyo iyo isticmaalka xawaaraha, xaddiga margin looga baahan yahay in la furo boos ama jagooyin ayaa lagu go'aamiyaa qiyaasta ganacsiga. Maadaama mugga ganacsigu uu kordhinayo shuruudaha marin-kaca. Si fudud u dhig; Miisaanku waa xaddiga loo baahan yahay in lagu qabto ganacsiga ama ganacsiyada furan. Leverage waa inta badan ee soo-saarka ee sinaanta xisaabta.
Waa maxay wicitaan margin?
Waxaan hadda ku sharxay in margin waa caddadka xisaab-celinta loo baahan yahay si loo qabto ganacsiga furan, waxaanu sharxnay in miisaaniyadu ay tahay inta badan soo-dhoweynta iyo xisaabtanka sirta. Sidaa daraadeed aynu u isticmaalno tusaala si aan u sharaxno sida ay u shaqeyneyso iyo sida wacitaanka margin dhici karto.
Haddii ganacsade uu leeyahay xisaab qiimihiisu yahay £ 10,000, laakiin wuxuu doonayaa inuu iibsado 1 badan (qandaraas 100,000) ee EUR / GBP, waxay ubaahnaan lahaayeen inay £ 850 ku galaan koontada ka baxda £ 9,150 ee faa'iido leh (ama margin bilaash ah), tani waxay ku saleysan tahay hal euro iibsasho qiyaas ahaan. 0.85 oo ka mid ah sterling pound. Dulqaaduhu wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo in ganacsiga ama tafaariiqlaha ganacsadaha uu ka qaadanayo suuqa suuqa, waxaa lagu daboolayaa dheelitirka koontadooda. Margin waxaa loo tixgelin karaa shabakad amaan, labadaba ganacsatada iyo dukaamada.
Ganacsadayaashu waa inay kormeeraan heerarka (isu-dheellitirnaanta) koontooyinkooda mar walba, sababtoo ah waxay noqon karaan kuwo faa'iido leh, ama waxay ku qanacsan yihiin in jagada ay ku jiri doonaan faa'iido, laakiin ay ku helaan ganacsigooda ama ganacsigooda waa la xirayaa haddii shuruudooda la jebiyo . Haddii margin hoos u dhaco heerarka loo baahan yahay, FXCC waxay bilaabi kartaa waxa loo yaqaan "call call". Xaaladahan, FXCC waxay kugula talineysaa ganacsadaha in ay meel dhigaan lacago dheeraad ah koontadooda, ama qaar ka mid ah (ama dhammaan) jagooyinka si ay u xaddidaan lumitaanka, labadaba ganacsatada iyo dookha.
Abuuritaanka qorshooyin ganacsi, marka la hubinayo in anshax marinta mar walbaa la ilaaliyo, waa in la go'aamiyaa isticmaalka waxtarka leh ee fududaynta iyo marginka. Qorsho faahfaahsan, faahfaahsan, istiraatiijiyad ganacsi oo loogu talo galay, oo lagu saleeyay qorshe ganacsi oo la taaban karo, waa mid ka mid ah mawduucyada guulaha ganacsiga. Isku-dubaridka isticmaalka caqli-gal ah ee joojinta ganacsiga iyo qaadashada amarada xadidan ee faa'idada, in lagu daro maareynta dhaqaale oo hufan waa in lagu dhiirigeliyo isticmaalka guuleysta luminta iyo margin, taasoo suurta gal ah in ganacsatada ay sii kobcaan.
Soo koobid, xaalad ah wicitaan margin laga yaabo in ay dhacdo waxaa sabab u ah isticmaalka isticmaalka xad-dhaafka ah ee culus, oo leh caasimad aan ku filnayn, iyadoo ay sii wadaan in ay lumiyaan ganacsiyada muddo dheer, marka la xiro.
Ugu dambeyntii, waxaa jira siyaabo kale oo lagu xadido wicitaanada margin iyo inta ugu badan ee wax ku ool ah waa in ganacsiga adoo isticmaalaya joojinta. Adiga oo isticmaalaya joojinta mid kasta iyo ganacsi kasta, shuruudahaaga marinka ayaa isla markiiba dib loo xisaabiyaa.
At FXCC, iyada oo ku xidhan xisaabta ECN ee la soo xulay, macaamiishu waxay dooran karaan lakabka looga baahan yahay, laga bilaabo 1: 1 oo dhan ilaa 1: 300. Macaamiisha raadinaya inay isbeddelaan heerkooda sarreeya ayaa sameeyn kara iyaga oo gudbinaya codsi iyada oo loo marayo aagaggooda ganacsiga ama email ahaan: accounts@fxcc.net
Leverage ayaa kordhin kara faa'iidadaada, laakiin sidoo kale waxay sii weyneyn kartaa khasaarahaaga. Fadlan hubi inaad fahamsan tahay farsamooyinka farsamada. Raadi talo madaxbannaan haddii loo baahdo.